Codsiga moobiilka vfxAlert hadda waa la heli karaa | vfxAlert official blog
Nooca beta ee codsiga mobilada vfxAlert
Nooca beta ee codsiga mobilada vfxAlert ayaa la soo saaray. Hadda calaamadaha ganacsiga ayaa xitaa la sii heli karaa.
Faa'iidooyinka ugu weyn ee barnaamijka mobilada
Calaamadaha ayaa la heli karaa wakhti kasta iyo wakhti kasta. Waad ku ganacsan kartaa guriga iyo safarka labadaba. Dhammaan qalabka aad ugu baahan tahay ganacsiga moobiilka, oo laga heli karo nooca desktop-ka, ayaa hadda ku jira taleefankaaga casriga ah.
Waad ka ganacsan kartaa labada lacagood iyo kuwa lammaanaha loo yaqaan 'crypto'. Ganacsiga Crypto waa suurtagal maalmaha fasaxa iyo ciidaha.
Helitaanka degdegga ah ee calaamadaha. Naqshadeynta dhalaalaysa iyo isdhexgalka dareenka leh taas oo xitaa ganacsade laylis ah uu fahmi karo barnaamijka.
Waxtarka tikniyoolajiyadda iyo ugu dambayntii si fiican looga fikiray-ka-saarista aaladaha mobilada. vfxAlert waxay u habeysaa wax soo saarkooda taleefannada casriga ah si ay ganacsiga uga dhigto mid ku habboon ganacsatada.
Barnaamijka mobilada ayaa diyaar u ah dhammaan isticmaaleyaasha. Si kastaba ha noqotee, milkiilayaasha rukunka PRO waxay ku arki karaan xogta tirakoobka oo dhameystiran koontada shaqsiyeed. Si aad u hesho rukunka PRO waxaad u baahan tahay inaad doorato canshuuraha lagama maarmaanka u ah koontada shakhsi ahaaneed. Kahor intaadan helin nooca PRO, ku dhaqan koontada bilaashka ah. Waxaad awoodi doontaa inaad si fiican u barato barnaamijka ganacsiga, aad u fahanto sida qalabka ganacsigu u shaqeeyo, iskuna daydo xeelado kala duwan. Kadib markaad fahanto sida arjiga iyo aaladaha gorfaynta u shaqeeyaan, waxaad bilaabi kartaa inaad la shaqeyso nooca PRO ee mobilada ganacsiga moobiilka.
Nooca mobilada waxaa kujira calaamado isku mid ah iyo qalab ganacsi sida kan desktop-ka. Kuwani waa tilmaamayaasha ganacsiga, jaantusyada internetka, jadwalka dhaqaalaha, taariikhda calaamadaha, awoodda ishaarooyinka, khariidadaha kuleylka. Aynu eegno mid ka mid ah oo faahfaahsan.
Online-gooldhalinta. Jaantuska, waxay ku arki karaan isbeddelada suuqa waqtiga-dhabta ah. Ganacsaduhu wuu beddeli karaa qaabka shaxanka sida uu u arko inuu ku habboon yahay. Waxa laga yaabaa inuu doorto laambadda ama shaxda baarka, wuxuu doortaa waqtiyada shaqada oo muujiya meelaha xiisaha leh. Sidoo kale, wuxuu ku dari karaa tilmaamayaasha kala duwan ee ganacsiga jaantuska.
Tilmaamayaasha ganacsiga. Qalabkani wuxuu gacan ka geysanayaa sidii loo qeexi lahaa isbeddelka iyo dib u noqoshadiisa iyo in la aqoonsado xilliga ugu habboon ee lagu bilaabi karo ganacsiga moobiilka. Tilmaamayaasha ayaa lagama maarmaan u ah dhismaha istiraatiijiyadda ganacsiga. Codsiga moobiilka ee 'vfxAlert', waxaa jira tiro badan oo tilmaamayaal kala duwan ah: kuwa isbeddellada iyo kuwa oscillators-ka ah.
Kalandarka dhaqaalaha . Kalandarka dhaqaalaha ayaa muujinaya wararka ugu waaweyn ee suuqa. Isticmaalka kalandarka ganacsadaha ayaa la ogeysiinayaa lacagaha ay yihiin kuwa lacagaha la filayo inay sare u kacaan iyo kuwa ku waayi doona macaashka.
Taariikhda calaamadaha. Taariikhda calaamadaha ayaa soo bandhigaya xogta kooban ee signalada qaarkood xilliyada kala duwan. Isbeddellada, waxaad arki kartaa sida nuuca calaamadaha ay isu beddelayaan, maxay ahaayeen qiimaha furitaanka iyo xiritaanka, iyo tirada dhibcaha la beddelay, maxay ahayd waqtiga dhicitaanka. Xogtan ayaa u oggolaanaysa ganacsadaha inuu aqoonsado calaamadaha ganacsiga ugu saxsan.
Awood Signal. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku aqoonsato boqolkiiba calaamadaha faa'iidada leh tilmaamayaasha hadda jira. Awooddu waa awoodda, inta saxda ah waa calaamadda labada lamaane ee lacagta ah. U adeegso qalabkan si aad u fahamto labada lamaane ee lacagta ah inay ku habboon tahay inaad furto ikhtiyaarka.
Khariidadaha kuleylka . Qalabkani wuxuu ku tusi doonaa boqolkiiba calaamadaha saxda ah ee xaaladaha qaarkood. Falanqaynta khariidadaha kuleylka ee aad fahmi karto waqtiga ay ku habboon tahay in la furo ikhtiyaarka.
Ma jiraan wax xayiraad ah oo ku saabsan shaqada barnaamijka moobilka ganacsiga. Ganacsaduhu wuxuu ku shaqeyn karaa qalab kasta iyo meel kasta oo adduunka ah.
Akhriso tilmaamaha "Sida loo rakibo arjiga mobilada vfxAlert". Version The mobile waa diyaar u ah milkiilayaasha Android, ugu dhaqsaha badan suurtogal ah inuu ku soo bixi Chine ganacsiga mobile on macruufka muuqan doonaa.